Fibre Optic Splitter Box Sanduuqa Xaragada Fiilooyinka 1X8 LGX Cajalad leh Xidhiidhiyeyaasha PC PC - Cableonline.com
Fibre optic guddi balastar
Feejignaanta Fibre Optic
Adabtarada Fibre Optic
Single Mode Fiber Optic Cable, gaashaaman Fiber Cable ...
Bannaanka Multimode Fiber Optic Cable Black PE jaakada ...
FBT Fiber Optic Cable Splitter Iyadoo Single Window, ...
G657A2 Fiber Optic Splitter Waayo Fiber indhaha Sensor ...
LGX PLC Fiber Optic Splitter Box oo leh SC APC Simplex ...
Fibre Optic Splitter Box Fiirsada Fakaraha Box 1X8 LGX Cassette oo leh Xidhiidhiyeyaasha PC PC
Faahfaahin Faahfaahin Sheeg Magaca: LGX PLC Splitter 1X8 Color: Gray Heerkulka Shaqada: -40C Ilaa 85C Waxyaabaha: LGX Fiber Nooca: G657A1 Nooca Xidhmada: LGX Caaga Fibre Optic Splitter Box Optical Splitter Box 1X8 LGX Cassette oo leh SC PC Connectors PLC Splitters ayaa la isticmaalay si loogu qaybiyo calaamadaha indhaha meelo badan oo loogu talagalay ka shaqeynta. Shabakadaha indhaha, badanaa waa lagama maarmaan in loo qeybiyo calaamadaha indhaha calaamado badan oo isku mid ah, ama in la isku daro calaamado badan oo loo yaqaan 'singl' ...
-40C Ilaa 85C
PLC Splitters waxaa loo isticmaalaa in loogu qaybiyo calaamadaha indhaha meelo badan oo laga shaqeynayo. Shabakadaha indhaha, badanaa waa lagama maarmaan in loo qeybiyo calaamadaha indhaha calaamado badan oo isku mid ah, ama in la isku daro calaamado badan hal calaamadood. PLC Splitter waa nooc ka mid ah qalabka maareynta awooda indhaha oo lagu farsameeyo iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada indhaha ee silica.
Waxaan bixinnaa taxane dhan oo ah 1 * N iyo 2 * N alaab kala-jajab ah oo loogu talagalay codsiyo gaar ah. Dhammaan alaabooyinka waxay buuxinayaan shuruudaha GR-1209-CORE-2001 iyo GR-1221-CORE-1999.
Nooca daabkan kala ah PLC splitter wuxuu heleyn karaa laba 1 * 8 PLC splitter gudaha, Aad ayey faa'iido ugu leedahay xalka isku imaatinka FTTH. Waxay leedahay waxqabad tayo sare leh, sida luminta gelinta oo hooseysa, PDL hooseysa, soo noqosho weyn oo soo noqnoqota iyo isku mid ahaansho heer sare ah oo dherer dhererkeedu dhan yahay 1260 nm ilaa 1620 nm, waxayna ka shaqeeyaan heerkulka -40ºC ilaa + 85ºC.
Qaybinta Calaamadaha Muuqaalka
Lan iyo Nidaamka CATV
Shabakadaha Fikradaha Dadban (PON)
Nidaamka Cabbiraadda iyo Nidaamka Laser
Nidaamka DWDM iyo CWDM
Dhimista Galinta Yar
Isku mid ahaanta kanaal-kanaal
Mowjad Hawleed Balaaran: Laga bilaabo 1260nm ilaa 1650nm
Heerkulka Howlgalka ee Wide: Laga bilaabo -40 ℃ ilaa 85 ℃
Kalsoonida sare iyo xasilloonida
Halbeegga Cutub Qiimaha
Nooca Badeecada 1 × 2 1 × 3 1 × 4 1 × 6 1 × 8 1 × 12 1 × 16 1 24 1 32 1 × 64 1 × 128
Awoodda Howlgalka nm 1260 ～ 1650
Loss Galinta Nooca. dB 4 6 7 9.4 10 12 13.2 16 16.5 20.5 24.5
Ugu badnaan 4.3 6.2 7.4 9.8 11 12.5 13.9 16.5 17.2 21.5 25.5
Midaynta (Max.) dB 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1 1.4 1.5 1.6 2 2.6
PDL (Max.) dB 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8
Khasaaraha Soo Laab dB /55 / ​​50
Toosinta dB ≥50
Nooca Badeecada 2 × 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 32 2 × 64 2 × 128
Loss Galinta Nooca. dB 4.3 7.3 10.5 14 17.2 20.8 24.8
Ugu badnaan 4.5 7.6 11 14.8 17.9 21.5 25.8
Midaynta (Max.) dB 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2 3
Q1, Waa maxay waqtiga dhalmadaadu?
J: Guud ahaan, waxay qaadan doontaa 3-7 maalmood kadib bixinta deebaajiga.
Waqtiga bixinta gaarka ah waxay kuxirantahay walxaha iyo tirada amarka.
Q2, Wax ma soo saari kartaa iyadoo la raacayo shaybaarada ama sawirka?
J: Haa, waxaan ku soo saari karnaa shaybaaradaada ama sawir gacmeedyadaada. Waxaan sidoo kale kuu qaabeyn karnaa oo aan kuu furan karnaa caaryada.
Q3, Maxay tahay siyaasadaada muunadaadu?
J, Waxaan ku soo bandhigi karnaa muunad bilaash ah oo loogu talagalay faallada aaladaha fiber optic, laakiin macaamiisha waa inay bixiyaan kharashka dirista.
S4, Miyaad tijaabisaa alaabadaada oo dhan ka hor dhalmada?
J, Haa, alaabada oo dhan 100% waa la tijaabiyaa kahor xirxirida iyo keenista ugu dambeysa.
Warbixinta baaritaanka waa la bixin karaa haddii loo baahdo.
Q5, Sideed u xaqiijin kartaa ganacsiga muddada-dheer oo aad u ilaalinaysaa iskaashi wanaagsan?
J, Marka hore, waxaan sii wadnaa horumar joogto ah si loo sameeyo alaab tayo sare leh loona bixiyo adeeg wanaagsan iyadoo la ilaalinayo sicirka tartanka si loo hubiyo faa'iidada macaamiisha.
Ka sokow, waxaan u ixtiraameynaa macaamiil kasta sida saaxiibbadeen oo waxaan u qaddarinnaa amar kasta oo yar ama weyn.
Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto wixii codsiyo ah - Lamaanahaaga aaminka ah ee fiber optics / OPTICO!
kala firdhiyaa fiber optic,
Qalabka siligga indhaha
Hore: Compact LGX Type 1 × 16 PLC Splitter, Bannaanka GPON Nidaamka Fibre Optic Cable Splitter
Xiga: Qalabka PLC Fiber Optic Splitter Module 1X64 Wavelength Operating Full 1260-1650nm
Magaca Waxyaabaha Faahfaahinta: LGX PLC Splitter 1X8Color: GreyWerkulka Shaqada: -40C Ilaa 85CMaterial: LGXFiber Type: G657A1Package Type: LGX PlasticFiber Optic Splitter Box Optical Splitter Box
1X4 0.9mm PLC splitter oo leh LC APC isku xira
CATV 0.9mm 1 × 32 PLC Fiirsada Laydhka Aragga ...
1X8 0.9mm PLC splitter 1m oo leh isku xiraha SC APC
ABS 1X32 PLC splitter SC UPC 1M FTTH xal
1 * 16 ABS Black Box Fibre Optic Splitter oo leh 3 ....
Maxaa intaa dheer
Dhibaatooyinka iyo Xalalka Frop Fiber Opti ...
Warshad Fibre Optic & Patch Panel Factory oo ku taal Shiinaha